Vexel dia mandefa UltraCam Osprey 4.1 - Geofumadas
Jolay, 2020 cadastre, jeospatial - GIS, GPS / Fitaovana, Engineering, fanavaozana, maro
Vexcel Imaging manambara ny famotsorana ny UltraCam Osprey 4.1 andiany manaraka, fakantsary haingam-pandeha lehibe be dia be ho an'ny sary sy ny sary nakana fotogrammetrique (PAN, RGB ary NIR) ary sary manimba (RGB). Ny fanavaozana matetika matetika amin'ny fisehoana nomerika maimaimpoana, tsy misy feo ary marina tsara dia ilaina amin'ny famolavolana tanàna maoderina. Ny fanamafisana ny fahombiazan'ny fanangonana sidina tsy ela akory izay manana kalitao radiometrika sy géometrika tsara indrindra, ny UltraCam Osprey 4.1 dia nametraka fenitra vaovao amin'ny sarintany an-tanàn-dehibe sy ny fanaovana modely 3D.
Nitarika ny fahefatra ho an'ny sensor efanon-tselatra an'habakabaka efatra. Ny rafi-pitondrana dia manambatra ireo lenta mahazatra mahazatra manantona indostrialy, mpikirakira sary CMOS amin'ny taranaka manaraka miaraka amina fitaovana elektronika mahazatra, ary fantsom-pamolavola sary an-tsary manerantany mba hanaterana sary momba ny kalitao mbola tsy nisy toy izany, momba ny famahana ny antsipirihany, ny fahazavana ary ny laharam-pivoarana. . Ny rafitra dia maka vokatra amin'ny sidina mankany amin'ny ambaratonga vaovao, manangona 1.1 Gigapixels isaky ny 0.7 segondra. Afaka manidina haingana kokoa ny mpanjifa, manarona faritra bebe kokoa ary mahita antsipiriany bebe kokoa.
Ny fomba fiasa vaovao Adaptive Motion Compensation (AMC) dia manonitra ny fipoahan'ny sary mihetsika amin'ny alàlan'ny hetsika multidirectional ary manonta ny fiovan'ny elanelan-tany amin'ny alàlan'ny sary manjavozavo mba hamoahana sary sy fahitsiana.
Ny fahazoana ara-barotra amin'ny UltraCam Osprey 4.1 dia manomboka amin'ny fiandohan'ny 2021.
Ho fanampin'ny endrika vaovao fanisana - ny UltraCam Osprey 4.1 dia fakantsary faha-4 amin'ny laharana voalohany azy - ity andiany vaovao ity koa dia manolotra fanavaozana maro ho an'ny fanatsarana mba hampivoarana ny fampiasana amin'ny ankapobeny. Anisan'ireo zavatra hafa: ny lohan'ny fakantsary mihena dia manitatra ny safidy ho an'ny fiaramanidina na dia fiaramanidina kely kokoa aza ary ny sehatry ny fijerena azo atao dia ahafahana mametraka mora foana tsy misy fijerena fakantsary. Ny mpanjifa izao dia mora kokoa ny miditra amin'ny IMU sy ny Hardware UltraNav, hanovana ny UltraNav na rafitra fitantanana sidina hafa ao an-toerana nefa tsy mila tamberna fanampiny aorian'ny fanesorana ny IMU.
“Miaraka amin'ny UltraCam Osprey 4.1 dia misy fakantsary roa amin'ny trano iray. Ny rafitra dia mameno ny filàna fampiharana samihafa miainga amin'ny alàlan'ny sarintany an-tanàna ka hatramin'ny fangatahana ny fomba amam-panao amin'ny alàlan'ny iraka fiaramanidina mitovy, "hoy i Alexander Wiechert, Tale Jeneralin'ny Vexcel Imaging. "Nandritra izany fotoana izany, nampitombo ny dian-tongotra vita tamin'ny nadir 20.000 mahery izahay nanerana ny tarika sidina rehetra mba hamoronana ny fahombiazan'ny famoriam-piaramanidina raha tsy amin'ny alàlan'ny rafitra fakantsary maoderina."
Habe sary PAN amin'ny 20.544 x 14.016 piksel (nadir)
14,176 x 10,592 teboka Ny haben'ny sary sary (oblique)
Sensors sary CMOS
Compensation Advanced Motion (AMC)
1 fefy isaky ny 0.7 segondra
80mm PAN fanovana rafitra.
Rafitra litera miloko 120mm (modely RGB Bayer)
Previous Post«Previous Vaovao vaovao ho an'ny andian-dahatsoratra Bentley Institute: Inside MicroStation CONNECT Edition
Next Post Geopois.com - Fa inona?manaraka »